Shixnadaha AirPods Max waxay sii wadaan inay ku daraan dib u dhac | Waxaan ka socdaa mac
Taasina waxay u muuqataa inaysan lahayn dhibic soo kabasho mar uun iyo shixnadaha loogu talagalay dhagaha dhagaha ee cusub ee Apple waxay ku darayaan taariikho maraakiib oo aan waligood hore loogu arag wax soo saarka Apple. Xitaa iphone-yada sanadahaas dib udhaca kama aysan fogayn inay gaaraan macaamiishooda, AirPods Max wuxuu maalin kasta ku daraa dib u dhacyo badan.
Haddii aad hadda iibsato waxay kuu soo diri doonaan bisha Maarso
Waxaan ka hadlaynaa Waqtiyada rarka oo u dhexeysa 8 ilaa 10 toddobaad oo sidaas darteed illaa bisha Maarso ee sannadkan cusub maba nala soo diri doono taleefannada dhagaha ee kiiska iibsashada cutub hadda. Runta ayaa ah in tani ay waalan tahay isla markaana adeegsadayaal yar ay u adeegi doonaan dukaamaysiga Apple waqtigan dhalmada dheer.
Mararka qaar websaydhada Apple-ka waxaa ku jira warar sheegaya in ay ku kala firidhsan yihiin daafaha dunida laakiin xaalku sidan maaha toddobaadkan iyo kii ka horreeyay ee gebi ahaanba ka dhammaaday. Xaqiiqdii Apple waxay dib u buuxisaa qaybo ka mid ah waqtiyo cayiman laakiin ma jirto hab fiican oo lagu ogaado taas haddii aanan si joogto ah u cusbooneysiin webka. Waqti ka hor waxaa jiray shabakada 'iStocknow' oo runtii waxtar laheyd in la helo kaydka laakiin AirPods Max ma shaqeeyo.
Marka haddii aad ka mid tahay kuwa ka fekeraya inay iibsadaan AirPods Max samir ama raadi beddello bogga Apple illaa iyo Waqtiyada bixinta waa la buunbuuniyaa oo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Shixnadaha AirPods Max waxay sii wadaan inay ku daraan daahitaanno
Adobe wuxuu si rasmi ah u joojiyaa taageerada Flash wuxuuna kugula talinayaa in la tirtiro